भवन निर्माण गर्दा आर्किटेक्ट वा ईन्जिनियर हायर गर्नुका फाइदाहरु - Basobaas Spotlight
भवन निर्माण गर्दा आर्किटेक्ट वा ईन्जिनियर हायर गर्नुका फाइदाहरु
May 31, 20205Mins Read
के तपाईं घर निर्माण वा पुन: निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ? थोरै व्यक्तिले मात्र निर्माणमा संलग्न जटिलताहरू बुझ्दछन् र त्यसैले यो काम को लागि बिज्ञलाई काममा लिनु राम्रो हो । विशेष गरी भवनको योजना र डिजाइनको बिषयमा इजाजतपत्र प्राप्त आर्किटेक्चर वा ईन्जिनियरले विशेष प्रशिक्षण लिएका हुन्छन र विज्ञता हासिल गरेका हुन्छन । चाहे तपाईं पुन: निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अथवा अर्को ताला थप्न चहानुहुन्छ, विज्ञहरुद्वारा सम्पूर्ण डिजाइन र निर्माण प्रक्रियाको माध्यमबाट तपाइलाइ मद्दत गर्न सक्दछन् । आर्किटेक्ट वा इञ्जिनियर लगाएर निर्णय गर्दा मुख्य भिन्नता भनेको यो हो कि आर्किटेक्टले कलात्मकता, स्पेसको लेआउट र भवनको डिजाईनमा बढी ध्यान दिनेछ, जबकि इन्जिनियर संरचनात्मक तत्व र प्राविधिक अवयवहरूमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । येही बिज्ञता को मिस्रणले नै एउटा बलियो र आरामदायक घर को कामना गर्न सकिन्छ । घर निर्माणको लागि धेरै चरणहरू छन्, तपाईंले सुरु गर्नु अघि इन्जिनियर वा आर्किटेक्टको विशेषज्ञता प्रयोग गर्दा सबै चरणलाई अन्तत: पैसा बचत गरि सजिलै समयेमै योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
भवनको पहिलो चरणमा तपाईले वास्तवमा के निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने निर्णय समावेश हुन्छ । यो समय घर निर्माण गर्ने व्यक्ति र आर्किटेक्चर वा ईन्जिनियर एक अर्कासग अमुल्य छलफल गर्छन । यो निर्णायक चरणको समयमा घरमालिकले उनीहरूको चाहना र आवश्यकता दुवै अभिव्यक्त गर्न सक्दछन् र आर्किटेक्चर वा ईन्जिनियर हालको मुख्य आवश्यकताहरूको आधारमा के कस्तो स्वरुप निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छन । यस समय परियोजनाको लागि आवश्यकताहरू जस्तै बेडरूम, फंक्शनल लेआउटहरू र एउटा कोठा कसरी प्रयोग गरिनेछ को बारे छलफल गर्ने समय हो। यस चरणको अवधिमा, एक परियोजनाको लागि समय सीमा र बजेट निर्धारण गरिन्छ।
एक पटक क्लाइन्ट र आर्किटेक्ट अन्तिम फ्लोर प्लानको साथ अगाडि बढ्न सहमत भएपछि योजनाबद्ध डिजाइनको रूपमा चिनिने परियोजनामा दृश्य कल्पना गर्न मद्दत पुर्‍याउन रफ स्केचहरू कोरिन्छ । यी प्रारम्भिक स्केचहरू वा कहिलेकाँही कम्प्युटर मोडेलहरूको अभिप्राय, ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू सन्तुष्ट छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न र आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न अनुमति दिनको लागि हो ।
यसले निर्माण प्रक्रियाको परिष्कृत चरणमा पुर्‍याउँछ, जसलाई डिजाइन विकास चरण पनि भनिन्छ, जहाँ रेखाचित्रहरू अधिक विशिष्ट र प्राविधिक हुन्छन् । कोठा आकार र चयन गरिएका सामग्रीका लागि विशिष्ट विवरणहरू यस बिन्दुमा सामान्यतया समातेर कुनै कापी वा कम्प्युटरमा समेटिएको हुन्छ । यदि अन्तिम रूप दिइएको छ भने, अब बिल्डरको लागि विस्तृत निर्माण निलो प्रिन्टहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । यदि सम्पत्तीको मालिकसँग पहिले नै बिल्डर छैन भने, यो समयमा आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरले सिफारिसहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछन्।
एक आर्किटेक्ट वा ईन्जिनियरलाइ लाग्ने लागत
हामी माझ गलत अवधारणा छ कि एक ईन्जिनियर वा वास्तुकार निर्माणको लागि एक थप लागत हुनेछ । यद्यपि यो वास्तवमा विपरित हो किनभने कुनै व्यवसायको काममा लिनु भनेको तपाईको परियोजनाको लगानी हो । एक ईन्जिनियर वा आर्किटेक्टको विशेषज्ञता प्रयोग गरेर, परियोजना अधिक कुशल र आर्थिक रूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ । तिनीहरूले तपाईंको लगानीको साथ, लगनका साथ काम गर्ने छन् र तपाईंको मूल्य बिन्दु भित्र सामग्री र निर्माणकर्ता चयन गर्नेछन् । अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा, राम्रोसँग डिजाइन गरिएको घरसँग पुन: राम्रो बिक्रि मूल्य हुन्छ ।
जबकि प्रत्येक बिज्ञले तिनीहरूको सेवाहरूको लागि बिभिन्न शुल्क लिने गर्दछन् । परियोजनाको प्रकार, समय र आवश्यक सेवाहरूको मूल्य निर्धारणलाई असर गर्दछ । केहि परियोजनाहरू एक घण्टा दरको लागि उपयुक्त हुन सक्छ, जबकि अरूले एक निश्चित शुल्क वा निर्माण लागतको प्रतिशत लिने गर्दछ । यो आवश्यक छ कि तपाईंले आर्किटेक्ट वा अभियान्तासँग उनीहरूलाई काममा लिनु अघि छलफल गर्नुहोस्, कसरी तिनीहरूले तपाईंको परियोजनाको दर स्थापना गर्दछन् र सुनिश्चित गर्दछन् भन्ने थाहा पाउनु होस् र सोहि अनुसार आफ्नो बजेट निर्धारण गर्नुहोस् । एकचोटि तपाईंले सही इन्जिनियर वा वास्तुकार भेट्टाउनुभयो भने, सेवाहरूको एक विवरण सहित एक सम्झौता, तालिका, र क्षतिपूर्ति, समावेश भएको सबै पक्षहरूद्वारा हस्ताक्षर र सहमति गर्न पर्छ जुन अनिवार्य छ।
घर निर्माण गर्दा आर्किटेक्ट वा ईन्जिनियर हायर गर्नुका फाइदाहरू
तपाईंको आवासीय सम्पत्तीको लागि इजाजतपत्र प्राप्त ईन्जिनियर वा आर्किटेक्टलाई हायर गर्नुका असीम लाभहरू छन् । उनीहरूले केवल घरमा ग्राहकको आवश्यकताहरू बुझ्नको लागि मात्र समय लिदैनन् , वास्तबमा उनीहरूले घर मालिकको जीवनशैलीको लागि ठाउँ विकास गर्न रचनात्मक दृष्टिकोण पनि प्रदान गर्न सक्दछन् । यसले पछि परियोजनामा डिजाइन त्रुटिहरूलाई काम गर्न मद्दत गर्दछ र निर्माण चरणमा देखा पर्ने कुनै समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दछ ।
जे होस् आर्किटेक्ट वा ईञ्जिनियरले घर मालिकलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दछन्, यो निर्णय गरेर आर्किटेक्ट वा ईञ्जिनियरलाई कस्तो डिजाइनको घर बनाउने भन्ने बिस्तृत जानकारी दिने काम घर मालिकको हो ।आर्किटेक्ट, विशेष रूपमा, योजना र अनुसन्धान र रणनीति को उपयोग गर्न को लागी केहि ज्ञात मुद्दाहरु लाई कम गर्न को लागी, लागत र स्पेस संग सम्बन्धित हुन सक्छ जुन ग्राहकको बजेट लाई निर्धारण गर्दछ र ती सामग्री र छनौटमा मद्दत प्रदान गर्दछ ।
तपाइँको विशेष आवश्यकताहरू पूरा हुनेछन् भनेर ग्यारेन्टी गर्न धेरै आर्किटेक्टहरू वा ईन्जिनियरहरूको साथ सुझाबको लागि समय लिनु महत्त्वपूर्ण छ । प्रत्येक व्यावसायिको आफ्नै डिजाइन शैली र विधिहरू हुन्छन्, त्यसैले तपाईको आफ्नै अनुपम शैली आवश्यकताहरू मिल्दो डिजाइन फेला पार्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सोहि सुझाबले तपाइँलाई तपाइँको परियोजनाको डिजाइन परिणामहरूको लागि सही व्यक्तिलाई भेट्ने अवसर दिन्छ । एक योग्य टोलीलाई काममा लगाएर आफ्नो सपनाको घर या परियोजना सजिलै झन्झट रहित बनाउन सक्नु हुन्छ किनकि भवन निर्माण लामो र जटिल प्रक्रिया हो ।
यो लेख कस्तो लाग्यो ? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
architect in kathmanduarchitecturearchitecture firm in kathmanduarchitecture in nepalConstruction of house in Kathmandudesign and decorengineerengineer in nepal